Bilada Nobelka oo lagu dhawaaqay iyo mid ka mid ah dadkii ku guuleystay oo dhintay | Somaliska
Bilada Nobel qeybteeda lagu bixiyo Sweden ayaa shalay lagu dhawaaqay dadkii ku guuleystay iyadoo 3 nin ay wadaageen bilada Daawada dadkaas oo kala ah Ralph Steinman oo Kanada ka soo jeeda, Bruce Beutler oo maraykan ah iyo Jules Hoffman oo Faransiis ah. Dadkaas ayaa bilada ku helay horumar ay ka sameeyeen daawada Kansarka.
Gudiga bilada bixiya ee jaamacada Karolinska Institutet ee magaalada Stockholm ayaa ka warhelay dhowr saacadood ka hor inta aysan ku dhawaaqin go’aankooda in ninka lagu magacaabo Ralph Steinman oo ka mid ah sadexda ku guuleystay bilada daawada uu geeriyooday isbuucii la soo dhaafay 30.September.
Ninkaan ayaa la sheegay in uusan war ka hayn in uu ku guuleystay bilada, xitaa gudiga bilada bixiya ayaan war ka heyn in uu geeriyooday oo markii ay weceen jaamacada uu wax ka dhigayay ayaa loo sheegay in ninkaas la soo aasay. Sharciga Nobelka ayaa mamnuucaya in la siiyo bilada qof dhintay balse gudiga Nobelka ayaa go’aamiyay in bilada la siinayo ninkaan maadaama ay arintiisa tahay mid qaas ah.
Bilada Nobelka ayaa sanadkasta waxaa laga bixiyaa Sweden iyo Norway, iyadoo halkaan lagu bixiyo bilada qeybta la siiyo dadka waxyaabaha horumarka leh soo saaray sanadihii ugu dambeeyay, halka Norway lagu bixiyo Nobel Peace Prize oo ah bilada nabada.
Bilada Nobel ayaa waxaa aasaay nin Swedish ah oo magaciisa la yiraahdo Alfred Nobel sanadkii 1895 kaasoo ahaa ninkii alifay waxyaabaha qarxa ee bambaanooyinka laga sameeyo.
Maxkamadaha socdaalka oo go’aanada si kala duwan u gaara
waa raio aad u fican thnks ayan idin leyahay. gulaysta waligin
Mo Amiin says:
October 7, 2011 at 23:41
Maskiin asagoo bilada Nobelka lasiin rabo ayuu dhintay